Hwehwɛ Dza Ɔyɛ Asomdwee Na Kõ Tsia Ahoɔyaw | Ɔweɔn-Aban Adzesua
Ɔweɔn-Aban—Dza Adzesua Nsɛm Wɔ Mu | February 2020
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Amis Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Australia Mmum Kasa Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Brazil Mmum Kasa Britain Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Costa Rica Mmum Kasa Croatia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuador Mmum Kasa Edo Efik El Salvador Mmum Kasa English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French French Mmum Kasa Ga (Nkran Kasa) Garifuna Georgian German German Mmum Kasa Gitonga Gokana Greek Greek Mmum Kasa Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guatemala Mmum Kasa Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Honduras Mmum Kasa Hungarian Hungary Mmum Kasa Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Isoko Italian Italy Mmum Kasa Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Kenya Mmum Kasa Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korea Mmum Kasa Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malawi Mmum Kasa Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexico Mmum Kasa Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mozambique Mmum Kasa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicaragua Mmum Kasa Nigeria Mmum Kasa Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Panama Mmum Kasa Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguay Mmum Kasa Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russia Mmum Kasa Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Slovenian Solomon Islands Pidgin South Africa Mmum Kasa Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Taiwan Mmum Kasa Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Venezuela Mmum Kasa Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba (Alata) Zambia Mmum Kasa Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Mmum Kasa Zulu
ADZESUA ASƐM 8
Hwehwɛ Dza Ɔyɛ Asomdwee Na Kõ Tsia Ahoɔyaw
“Hom mma yentsiw dza ɔyɛ asomdwee, nye dza yɛdze bɔtotow hɛnho do nkorkor.”​—ROM. 14:19.
NDWOM 113 Yɛwɔ Asomdwee
1. Osian ahoɔyaw ntsi, ebɛn asɛm too Joseph n’ebusua no?
NNA Jacob dɔ ne mba no nyinara, naaso nna ɔwɔ ɔdɔ soronko ma ne ba Joseph a oedzi mfe 17 no. Joseph no nuanom no yɛɛ hɔn adze dɛn wɔ iyi ho? Ahoɔyaw ntsi, hɔn enyi beer no, na wɔhyɛɛ ase taan no. Nna Joseph nnyɛɛ biribiara a ɔwɔ dɛ no nuanom nya ngyinado dze tan no. Naaso, wɔtɔɔn no kɔr nkowaasom mu, na wodzii ator kãa kyerɛɛ hɔn egya dɛ abowa bɔn bi akyer no dɔba no awe. Ahoɔyaw maa wɔsɛɛ asomdwee a nna wɔwɔ wɔ hɔn ebusua mu no, na wɔmaa hɔn egya dzii awerɛhow kɛse.​—Gen. 37:3, 4, 27-34.
2. Dɛ mbrɛ Galatiafo 5:19-21 ma yehu no, ebɛnadze ntsi na ahoɔyaw yɛ su a ɔyɛ hũ?
2 Aber a Kyerɛwnsɛm no robobɔ “honam ndwuma” a ɔdze nyimpa kɔ owu mu no, ɔdze ahoɔyaw * kaa ho; honam ndwuma no botum esiw obi kwan dɛ obenya Nyankopɔn n’Ahendzi no. (Kenkan Galatiafo 5:19-21.) Mpɛn pii no, ahoɔyaw na ɔdze suban bɔn tse dɛ ɔtan, mansotwe, nye ebufuw ba.
3. Ebɛnadze na yebosusu ho wɔ adzesua yi mu?
3 Joseph no nuanom no hɔn asɛm no ma yehu mbrɛ ahoɔyaw botum asɛɛ enuanom hɔn ntamu nye asomdwee a ɔwɔ ebusua mu no. Ɔwɔ mu dɛ yɛnnkɛyɛ dza Joseph no nuanom no yɛe no bi dze, naaso hɛn nyina yɛ nyimpa a hɛn akoma nndzi mũ na ɔyɛ ɔdaadaafo. (Jer. 17:9) Dɛm ntsi ɔtɔ da a, hɛn enyi botum aber afofor. Hom mma yensusu kɔkɔbɔ ho nhwɛdo ahorow bi ho wɔ Bible no mu. Ɔbɔboa hɛn ma yeehu siantsir a ahoɔyaw botum agye ndwow wɔ hɛn akoma mu. Iyi ekyir no, yɛbɔhwɛ dza yebotum ayɛ akõ etsia ahoɔyaw, na yaakɔ do ama asomdwee aatsena yɛnye afofor ntamu.
EBƐNADZE NA OTUM MA OBI YƐ AHOƆYAW?
4. Ebɛnadze ntsi na Philistiafo no hɔn enyi beer Isaac?
4 Ber a obi enya ahonyadze pii. Nna Isaac wɔ ahonyadze pii, na ahoɔyaw ntsi, Philistiafo no enyi beer ahonyadze a nna ɔwɔ no. (Gen. 26:12-14) Mbura a Isaac saw mu nsu dze ma no mbowa ma wɔnom no, wosisiiw ne nyinara. (Gen. 26:15, 16, 27) Dɛ mbrɛ Philistiafo no yɛe no, ndɛ so nyimpa binom hɔn enyi ber afofor a wɔwɔ ahonyadze pii sen hɔn no. Nnyɛ ndzɛmba a afofor wɔ nko na wɔpɛ, na mbom hɔn yamu so a, nkyɛ efi hɔn nsa.
5. Nna ebɛnadze ntsi na nyamesom akandzifo no enyi ber Jesus?
5 Ber a nyimpa pii pɛ obi n’asɛm. Nna Jewfo nyamesom akandzifo no enyi ber Jesus, osiandɛ nna nyimpa pii pɛ n’asɛm. (Matt. 7:28, 29) Nna Jesus yɛ Nyankopɔn n’ananmusinyi, na ɔkyerɛkyerɛɛ nokwar no. Naaso, dɛm nyamesom akandzifo yi kekãa atorsɛm dze sɛɛ dzin pa a nna Jesus wɔ no. (Mark 15:10; John 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Ebɛnadze na yebotum esũa efi dɛm asɛm yi mu? Asafo no mu no, osian suban pa a nyimpa binom wɔ ntsi, hɛn nuanom mbarimba na mbaa pɛ hɔn asɛm. Ɔsɛ dɛ yɛkõ tsia biribiara a ɔbɛma hɛn enyi aber hɔn a wɔtse dɛm no. Dɛ nkyɛ ahoɔyaw ntsi hɛn enyi bɛber hɔn no, ɔbɛyɛ papa dɛ yɛbɔbɔ mbɔdzen esũasua ɔdɔ a wɔda no edzi no.​—1 Cor. 11:1; 3 John 11.
6. Ebɛn kwan do na Diotrephes daa ahoɔyaw su edzi?
6 Ber a obi enya ɔsom ho kwan wɔ asafo no mu. Tsetse Christianfo no hɔn aber do no, ahoɔyaw ntsi, nna Diotrephes n’enyi ber hɔn a wodzi ndzɛmba enyim wɔ Christianfo asafo no mu. Osian ‘panyin a nna ɔrepɛ edzi’ wɔ asafo no mu ntsi, ɔkekãa ɔsomafo John nye enuanom afofor hɔnho nsɛmbɔn mbrɛ ɔbɛyɛ a hɔn a nna wɔwɔ asafo no mu no bɔhwer obu a wɔwɔ ma hɔn no. (3 John 9, 10) Ɔwɔ mu dɛ yɛnnkɛyɛ dza Diotrephes yɛe no bi dze, naaso annhwɛ a, hɛn enyi botum ahyɛ ase aber hɛn nua Christiannyi bi a oenya ɔsom ho kwan a nkyɛ yɛhwɛ kwan dɛ yebenya. Hɛn enyi botum aber onua a ɔtse dɛm nkanka ber a yɛtse nka dɛ hɛn so yɛfata dɛ yenya ho kwan a ɔtse dɛm, anaa mpo ber a yɛtse nka dɛ yɛbɔ mbɔdzen sen onua a ɔtse dɛm no.
Hɛn akoma tse dɛ asaase, na suban pa a yɛwɔ no tse dɛ nhyiren fɛɛfɛw. Naaso, ahoɔyaw tse dɛ nworahaban bɔn. Ahoɔyaw botum esiw suban pa tse dɛ ɔdɔ, ayamuhyehye, na ayamuyie a yebenya no kwan (Hwɛ nkyekyɛmu 7)
7. Ebɛn nsunsuando na ahoɔyaw botum enya wɔ hɛn do?
7 Ahoɔyaw tse dɛ nworahaban bɔn. Sɛ ɔgye ndwow wɔ hɛn akoma mu a, obotum ayɛ dzen ama hɛn dɛ yebotu ase. Suban bɔn bi tse dɛ nyinkuntwe, ahomemado, nye pɛsɛankonya botum ama ahoɔyaw aagye ndwow wɔ hɛn mu. Ahoɔyaw botum ama yeekwetsir dɛ yɛbɛda su pa tse dɛ ɔdɔ, ayamuhyehye, nye ayamuyie edzi. Sɛ yehu dɛ yɛreyɛ enya ahoɔyaw su wɔ hɛn akoma mu a, ɔsɛ dɛ yetu ase ntsɛmara. Yebesi dɛn akõ etsia ahoɔyaw?
ƆSƐ DƐ YƐBRƐ HƐNHO ADZE NA YƐMA HƐN ENYI SƆ DZA YƐWƆ NO
Yebesi dɛn akõ etsia ahoɔyaw a ɔtse dɛ nworahaban bɔn no? Nyankopɔn no sunsum krɔnkrɔn botum aboa hɛn ma yeetu ahoɔyaw ase na yɛdze su pa tse dɛ ahobrɛadze nye dza yɛwɔ a yɛbɛma hɛn enyi asɔ no ahyɛ ananmu (Hwɛ nkyekyɛmu 8-9)
8. Ebɛn su ahorow na obotum aboa hɛn ma yaakõ etsia ahoɔyaw?
8 Sɛ yɛbrɛ hɛnho adze na yɛma hɛn enyi sɔ dza yɛwɔ a, yebotum akõ etsia ahoɔyaw. Sɛ yɛma dɛm suban pa ahorow yi hyɛ hɛn akoma mu mã a, yɛnnkɛyɛ nyimpa a wɔyɛ ahoɔyaw. Ahobrɛadze su bɔboa hɛn ma yeekwetsir dɛ yɛbɔdwen hɛnho ma aatra do. Obi a ɔbrɛ noho adze no nntse nka dɛ noho hia kyɛn afofor. (Gal. 6:3, 4) Obi a n’enyi sɔ dza ɔwɔ no, ɔpen dza ɔwɔ no do, na ɔmmfa noho nntoto afofor ho. (1 Tim. 6:7, 8) Obi a ɔbrɛ noho adze na n’enyi sɔ dza ɔwɔ no, sɛ ohu dɛ obi enya adze papa bi a, n’enyi gye ma dɛm nyimpa no.
9. Dɛ mbrɛ Galatiafo 5:16 nye Philippifo 2:3, 4 ma yehu no, ebɛnadze na sunsum krɔnkrɔn bɔboa hɛn ma yaayɛ?
9 Sɛ yebokwetsir ahoɔyaw na yaada ahobrɛadze edzi, na yaama hɛn enyi asɔ dza yɛwɔ a, yebehia Nyankopɔn no sunsum krɔnkrɔn no mboa. (Kenkan Galatiafo 5:16; Philippifo 2:3, 4.) Jehovah no sunsum krɔnkrɔn botum aboa hɛn ma yaapɛnsapɛnsa hɛn akoma nye hɛn nsusui mu. Nyankopɔn no mboa do no, yebotum eyi adwen na nsusui bɔn efi hɛn mu, na yɛdze dza ɔma ntowdo ahyɛ ananmu. (Ndw. 26:2; 51:10) Hom mma yensusu nhwɛdo a Moses na Paul yɛe no ho. Dɛm mbarimba yi kõe tsiaa biribi a nkyɛ obotum ama wɔaayɛ ahoɔyaw.
Aberantsɛ bi a ɔyɛ Israelnyi tutuu mbirika kɛkãa kyerɛɛ Moses na Joshua dɛ nyimpa beenu bi rehyɛ nkɔm wɔ nseraban no mu. Joshua kãa kyerɛɛ Moses dɛ ɔmbra hɔn, naaso Moses annyɛ. Mbom, ɔkãa kyerɛɛ Joshua dɛ n’enyi agye dɛ Jehovah ehue no sunsum egu dɛm mbarimba beenu yi do (Hwɛ nkyekyɛmu 10)
10. Ebɛn tsebea na nkyɛ obotum asɔ Moses ahwɛ? (Hwɛ mfonyin a ɔwɔ Ɔweɔn-Aban yi enyim no.)
10 Nna Moses wɔ tum kɛse wɔ Nyankopɔn no nkorɔfo do, naaso oennsiw afofor kwan dɛ wobenya tum a ɔtse dɛm no bi. Dɛ nhwɛdo no, mber bi mu, Jehovah yii sunsum a ɔwɔ Moses do no bi maa Israelfo mpanyimfo bi a nna woebehyia mu wɔ ehyiadzibuw no ho. Ɔno ekyir ber tsiabaa bi no, Moses nyaa no ntsee dɛ mpanyimfo beenu bi a woemmbehyia mu wɔ ehyiadzibuw no ho no, hɔn so enya sunsum krɔnkrɔn ma wɔrehyɛ nkɔm. Joshua kãa kyerɛɛ Moses dɛ ɔmbra dɛm mpanyimfo beenu yi. Ber a Joshua kãa dɛm no, ebɛnadze na Moses yɛe? Moses amma annyɛ no yaw dɛ Jehovah ama mbarimba beenu yi sunsum krɔnkrɔn. Mbom, ɔbrɛɛ noho adze na ɔnye hɔn dzii dɛw wɔ ho kwan a wonyae no ho. (Nka. 11:24-29) Ebɛnadze na yebotum esũa efi Moses no nhwɛdo no mu?
Ebɛn kwan do na asafo mu mpanyimfo botum esũasua ahobrɛadze su a nna Moses wɔ no? (Hwɛ nkyekyɛmu 11-12) *
11. Asafo mu mpanyimfo besi dɛn esũasua Moses?
11 Sɛ eyɛ asafo mu panyin a, ɔnodze susu asɛmbisa yi ho, Ana wɔakã akyerɛ wo pɛn dɛ tsetse onua bi ma ondzi dwuma bi a w’enyi gye ho papaapa wɔ asafo no mu? Dɛ nhwɛdo no, bi a w’enyi gye ho kwan a ewɔ dɛ dapɛn biara ehwɛ Ɔweɔn-Aban Adzesua do no ho. Naaso, sɛ eyɛ obi a ebrɛ woho adze tse dɛ Moses, na wɔkã kyerɛ wo dɛ tsetse onua bi mbrɛ ɔbɛyɛ a daakye obedzi asodzi a ɔtse dɛm ho dwuma a, erenntse nka dɛ wɔpɛ dɛ wɔgye ho kwan a ɔtse dɛm fi wo nsamu. Mbom, w’enyi bɛgye ho dɛ ebɔboa wo nua no.
12. Ebɛn kwan do na Christianfo pii a wɔwɔ hɔ ndɛ reda no edzi dɛ wɔbrɛ hɔnho adze, na hɔn enyi sɔ dza wɔwɔ no?
12 Hom mma yɛnhwɛ tsebea fofor a hɛn nuanom mbarimba pii a hɔn mfe akɔ enyim rihyia. Wɔdze mfe pii asom dɛ mpanyimfo ntamu nkitahodzifo. Naaso, sɛ wodzi mfe 80 a, wofi hɔn pɛ mu dze ho kwan a ɔtse dɛm to hɔ ma panyin fofor. Amansin do ahwɛfo so, sɛ wodzi mfe 70 a, wofi ahobrɛadze mu dze ho kwan a ɔtse dɛm to hɔ, na wɔgye ɔsom ho kwan fofor a wɔdze ma hɔn no to mu. Mfe kakra a abɛsen kɔ no, wɔama Bethel ebusua no mufo pii a wɔwɔ wiadze nyina no akɛyɛ akwampaae edwuma. Dɛm enuanom mbarimba na mbaa anokwafo yi enyi mmber hɔn a sesei wɔreyɛ edwuma a nkyɛ mber bi mu no nna wɔyɛ no.
13. Ebɛnadze na nkyɛ obotum ama Paul n’enyi aber asomafo 12 no?
13 Ɔsomafo Paul so yɛ obi a ɔdaa no edzi dɛ ɔbrɛ noho adze, na n’enyi sɔ dza ɔwɔ no. Paul amma n’enyi ammber obiara. Ɔyeer noho yɛɛ asɛnka edwuma no, naaso ofi ahobrɛadze mu kãa dɛ: “Emi nye asomafo no mu ekumaba a mennsɛ dɛ wɔfrɛ me ɔsomafo.” (1 Cor. 15:9, 10) Nna asomafo 12 no ka Jesus ho wɔ n’asaase do ɔsom edwuma no mu, naaso Paul ammbɛyɛ Christiannyi dɛm aber no. Ɔyɛ Jesus no wusoɛr ekyir na Paul bɛyɛɛ Christiannyi. Ɔwɔ mu dɛ ekyir yi wɔpaaw Paul dɛ ‘ɔsomafo ma amanamamfo’ dze, naaso woemmbu no dɛ ɔka asomafo 12 no ho. Oennya dɛm ho kwan soronko no. (Rom. 11:13; Andw. 1:21-26) Dɛ nkyɛ Paul n’enyi bɛber dɛm mbarimba 12 no nye ebusuabɔ a no mu yɛ dzen a wɔnye Jesus nyae no, ɔmaa n’enyi sɔɔ dza nna ɔwɔ no.
14. Sɛ yɛyɛ nyimpa a yɛbrɛ hɛnho adze na hɛn enyi sɔ dza yɛwɔ a, ebɛnadze na yɛbɛyɛ?
14 Sɛ yɛbrɛ hɛnho adze na yɛma hɛn enyi sɔ dza yɛwɔ a, yebotum esũasua Paul na yaakyerɛ obu ama hɔn a Jehovah ama hɔn tum no. (Andw. 21:20-26) Jehovah ayɛ nhyehyɛɛ dɛ asafo mu mpanyimfo ndzi ndzɛmba enyim wɔ Christianfo asafo no mu. Ɔmmfa ho dɛ mbarimba yi tɔ sin no, Jehovah bu hɔn dɛ wɔyɛ ‘akyɛdze a wɔdze hɔn ama nyimpa.’ (Eph. 4:8, 11) Sɛ yɛda obu edzi kyerɛ asafo mu mpanyimfo, na yɛbrɛ hɛnho adze dzi hɔn akwankyerɛ ekyir a, yɛbɔtwe abɛn Jehovah kɛse, na yɛnye hɛn nuanom Christianfo bɛtsena asomdwee mu.
“HOM MMA YENTSIW DZA ƆYƐ ASOMDWEE”
15. Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ yɛyɛ?
15 Sɛ ahoɔyaw ntsi hɛn enyi ber hɛn nuanom anaa hɛn nuanom enyi ber hɛn a, yerunntum nnye hɛnho nntsena asomdwee mu. Ɔsɛ dɛ yetu ahoɔyaw ase fi hɛnankasa hɛn akoma mu na yekwetsir dɛ yɛbɛma afofor enya su a ɔtse dɛm wɔ hɔn akoma mu. Sɛ yebotum etu anamɔn a ohia yi a, ahyɛdze a Jehovah dze ama hɛn dɛ “yentsiw dza ɔyɛ asomdwee, nye dza yɛdze bɔtotow hɛnho do nkorkor” no, ɔsɛ dɛ yedzi do. (Rom. 14:19) Ebɛnadze pɔtsee na yebotum ayɛ aboa afofor ma wɔaakõ etsia ahoɔyaw, na yebesi dɛn ama asomdwee aatsena yɛnye afofor ntamu?
16. Yebesi dɛn aboa afofor ma wɔaakõ etsia ahoɔyaw?
16 Hɛn suban na hɛn ndzeyɛɛ botum enya tum kɛse wɔ afofor do. Wiadze no pɛ dɛ yɛdze asetsena mu ndzɛmba a yɛwɔ no ‘pɛ enyimnyam’ ma hɛnho. (1 John 2:16) Naaso, suban a ɔtse dɛm hyɛ ahoɔyaw ho nkuran. Asetsena mu ndzɛmba a yɛwɔ anaa ndzɛmba a yɛpɛ dɛ yɛtɔ no, sɛ yekwetsir dɛ yɛbɛkã ho asɛm mpɛn pii akyerɛ nkorɔfo a, yebotum ama woeekwetsir dɛ wɔbɛyɛ ahoɔyaw. Ɔkwan fofor a yebotum ekwetsir dɛ yɛbɛma afofor ayɛ ahoɔyaw nye dɛ, yebenya ahobrɛadze adwen wɔ ho kwan ahorow a yɛwɔ wɔ asafo no mu ho. Sɛ yɛkɔ do kã ho kwan ahorow a yɛwɔ wɔ asafo no mu ho asɛm kyerɛ afofor a, obotum ayɛ mberɛw dɛ wɔbɛyɛ ahoɔyaw. Naaso, sɛ yefi hɛn akoma mu kyerɛ afofor ho enyigye na yɛkyerɛ ndzɛmba pa a wɔyɛ no ho enyisɔ a, yɛboa hɔn ma wɔpen dza wɔwɔ no do, na yɛma asomdwee na koryɛ tsena asafo no mu.
17. Ebɛnadze na Joseph no nuanom no tumii yɛe, na ebɛnadze ntsi a?
17 Yebotum edzi ɔkõ a yɛrokõ tsia ahoɔyaw no do konyim! Hom mma yɛnhwɛ Joseph no nuanom no hɔn asɛm no bio. Ber a wɔnye Joseph enndzi no yie no, mfe pii ekyir no, wohyiaa no wɔ Egypt. Ansaana Joseph reda noho edzi akyerɛ no nuanom no, ɔsɔɔ hɔn hwɛɛ dɛ wɔasesa hɔn suban anaa. Ɔnye hɔn too nsa dzidzii. Edzidzi no ase no, ɔmaa hɔn nua ekumaba Benjamin edziban pii kyɛɛn dza ɔdze maa no nuanom nkaa no. (Gen. 43:33, 34) Naaso, biribiara nnyi hɔ a ɔkyerɛ dɛ no nuanom no enyi beer Benjamin. Mbom, wɔdaa no edzi dɛ nna wɔdwen hɔn nua no nye hɔn egya, Jacob ho. (Gen. 44:30-34) Osiandɛ nna Joseph no nuanom no egyaa hɔn ahoɔyaw su no ntsi, wotumii maa asomdwee baa hɔn ebusua mu bio. (Gen. 45:4, 15) Dɛmara so na sɛ yeyi ahoɔyaw su biara fi hɛn mu a, yɛbɔboa ma asomdwee aakɔ do atsena hɛn ebusua nye asafo no mu.
18. Dɛ mbrɛ James 3:17, 18 kã no, sɛ yɛboa ma asomdwee tsena yɛnye afofor ntamu a, ebɛnadze na obefi mu aba?
18 Jehovah pɛ dɛ yɛkõ tsia ahoɔyaw na yetsiw dza ɔyɛ asomdwee. Ɔsɛ dɛ yɛyer hɛnho papaapa yɛ ndzɛmba ebien yi. Dɛ mbrɛ yeesusu ho wɔ adzesua yi mu no, yɛyɛ nyimpa a yɛtɔ kɔ ahoɔyaw anaa enyiber do. (Jas. 4:5) Afei so, wiadze a yɛtse mu no hyɛ ahoɔyaw anaa enyiber ho nkuran. Naaso, sɛ yɛbrɛ hɛnho adze, na yɛma hɛn enyi sɔ dza yɛwɔ, na yɛkyerɛ dza afofor yɛ ho enyisɔ a, yɛnnkɛyɛ ahoɔyaw anaa hɛn enyi nnkɛber afofor. Mbom, yɛbɔboa ma asomdwee aatsena yɛnye afofor ntamu mbrɛ ɔbɛyɛ a yebotum asow tsenenee aba.​—Kenkan James 3:17, 18.
Ebɛn kwan do na sunsum krɔnkrɔn botum aboa hɛn ma yaakõ etsia ahoɔyaw?
Sɛ yɛbrɛ hɛnho adze na yɛma hɛn enyi sɔ dza yɛwɔ a, ebɛn kwan do na ɔbɔboa hɛn ma yaakõ etsia ahoɔyaw?
Sɛ yɛda suban pa edzi a, ebɛn kwan do na obotum aboa afofor ma wɔaakõ etsia ahoɔyaw?
^ nky. 5 Yɛwɔ asomdwee wɔ Jehovah n’ahyehyɛdze yi mu. Naaso, ahoɔyaw ntsi, sɛ yɛma kwan ma hɛn enyi ber hɛn nuanom a, obotum asɛɛ asomdwee a yɛwɔ no. Adzesua yi mu no, yɛbɔhwɛ dza ɔdze ahoɔyaw ba. Afei so, yɛbɔhwɛ mbrɛ yebesi akõ etsia dɛm suban bɔn yi nye mbrɛ yebesi ama asomdwee aatsena yɛnye hɛn nuanom ntamu.
^ nky. 2 NSƐM BI A WƆAKYERƐKYERƐ MU: Dɛ mbrɛ wɔakã ho asɛm wɔ Bible no mu no, ahoɔyaw botum ama obi n’enyi aber adze a afofor wɔ. Afei so, ɔyɛ su a otum ma obi tse nka dɛ, dza afofor wɔ no, ɔka nanko a, nkyɛ efi hɔn nsa.
^ nky. 61 MFONYIN NO HO NKYERƐKYERƐMU Krataafa 18: Asafo mu mpanyimfo reyɛ nhyiamu. Wɔrekã akyerɛ panyin kor a ne mfe akɔ enyim a ɔhwɛ Ɔweɔn-Aban Adzesua do no dɛ ɔntsetse asafo mu panyin a ɔyɛ aberantsɛ no ma ondzi asodzi a ɔtse dɛm ho dwuma. Ɔwɔ mu dɛ asafo mu panyin a ne mfe akɔ enyim no enyi gye no dwumadzi no ho papaapa dze, naaso oefi n’akoma nyina mu agye mpanyimfo kuw no hɔn gyinaesi no ato mu, na ɔrema asafo mu panyin a ɔyɛ aberantsɛ no nyansahyɛ a ɔbɔboa no, na ofi n’akoma mu rekamfo no so.
Fa mona Fa mona Hwehwɛ Dza Ɔyɛ Asomdwee Na Kõ Tsia Ahoɔyaw
w20 February nkr. 14-19
Jehovah, Hɛn Sor Egya No, Dɔ Hɛn Papaapa
Yɛdɔ Jehovah, Hɛn Sor Egya No Papaapa
Ma Jehovah Mboa Wo Na Nya Akomatɔyamu
ASETSENA MU NSƐM Enuanom A Wɔyɛ Nhwɛdo Pa A Musũasuaa Hɔn No Ama Menya Nhyira Pii
Text Kyerɛ no mu dza epɛ dɛ etwẽ na ekenkan ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU February 2020
Fa mona Fa mona ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU February 2020
ƆWEƆN-ABAN—DZA ADZESUA NSƐM WƆ MU February 2020